Grand Pavois-Mahajanga: zazalahy 13 taona maty nisaringotra tamina vedety | NewsMada
Par Taratra sur 10/10/2019
Tsy fantatra mazava ny nanaovany ilay fihetsika… Efa nisaringotra tamin’ny “helice” an’ny lakana haingam-pandeha iray ilay zazalahy 13 taona no hitan’ny olona. Nifamonjena saingy tsy tana ny ainy…
Zava-doza no niseho teny amin’ny Grand pavois Mahajanga, omaly. Tranga nampikoropaka ny mpaka rivotra ny nahazo an’i Flaviot raha nilomano teny an-dranomasina. Araka ny nambaran’ny Adjudant-Chef Sylvestre, kaomandin’ny seranam-piaramanidina ao Amborovy dia nisarangotra tamin’ny « hélice »-na vedety an’ny toeram-pisakafoana iray ity zazalahy 13 taona ity, omaly tolakandro manodidina ny tamin’ny 01 ora sy dimy minitra teo. Nitondra mpizahatany avy nanjono ilay vedety ary handeha hihantsona eny amoron-dranomasina no nisarangotan’ilay zazalahy teo am-pilomanosana.
Vokany, naratra mafy i Flaviot ary very ra be dia be, ka nifamonjen’ny rehetra teo an-toerana. Nohazavain’ity manamboninahitra ity tamin’izany fa kely ny heriny noho ny loza nahazo azy. Natao izay namoahana azy tao anaty rano ka nentina hihazo ny hopitaly ahazoany ny fitsaboana rehetra. Hakiviana anefa no hita teo amin’ny endriky ny rainy teny an-dalana, hihazo ny tobim-pitsaboana tao anatina fiaran’olon-tsotra nanolo-tanana, satria tsy tonga teny an-toerana akory dia tsy tana intsony ny ain’i Flaviot.
Very sombinaina… Alahelo sy hakiviana no nisoritra teny amin’ ny tarehin’i Flavien, rain’I Flaviot, nahita ny voina nahazo an-janany, omaly . Izy izay tsy lavitra akory fa teny amin’ny “Petite plage” ihany koa, naka rivotra. Nohamarinin’ny kaomandin’ny borigadin’ny seranam-piaramadin’Amborovy fa tompon-tany ao Mahajanga izy mianaka ireto, ary nandeha nilomano teny an-dranomasina no anton-dian’izy ireo teny amin’io toerana io kinanjo loza no nentina nody.
Manentana arak’izany ny zandary ao an-toerana ny tsy hanarahan’ireo olona eny amin’ny manodidina ireny sambo madinika haingam-pandeha ireny na ny sambo eny an-dranomasina. Nohamafisin’izy ireo ihany koa fa norarana ny fandehanan’ny “quad” manamorona ny sisin-dranomasina mba hisorohana ny loza, ireny izay anisan’ny mora mivadika vao tsy mahay mitondra azy. Fantatra ihany koa fa efa mandeha ny famotorana mahakasika ity tranga ity ao Mahajanga.